एउटै कोखका तीन दिदिबहिनीले एकै पटक पीएचडी गरेर छोरी कम छैनन् भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिए – Khabaarpati
एउटै कोखका तीन दिदिबहिनीले एकै पटक पीएचडी गरेर छोरी कम छैनन् भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिए
December 27, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on एउटै कोखका तीन दिदिबहिनीले एकै पटक पीएचडी गरेर छोरी कम छैनन् भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिए
काठमाडौं । कुनै बेला हाम्रो समाजमा बढी नै छोरीलाई बोझका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । तर अहिले समय फेरिएको छ । आजको समयमा समाजमा छोरा भन्दा छोरी धेरै अगाडि बढेको हामी देख्न सक्छौँ । अहिले विश्वभर महिलाहरु पुरुषसँग चर्को रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् ।
आज हामी यस्तै एक सफलताको कुरा लिएर आएका छौँ । भारत, राजस्थानको झुनझुनु जिल्लाका तीन दिदीबहिनीहरूले शिक्षा संसारमा इतिहास बनाएका छन् । तीनै जनाले एक साथ पीएचडी डिग्री हासिल गरेका छन् । तीन बहिनीहरूको सफलता राजस्थानको पहिलो र भारतको दोस्रो घटना हो । उनीहरू भन्दा पहिले तीन जना दिदीबहिनीहरूले एकसाथ पीएचडी डिग्री प्राप्त गर्ने रेकर्ड भारत, मध्य प्रदेशको रीवाका छोरीहरूको नाममा थियो ।
वन इन्डिया हिन्दीसँग कुराकानीमा किरण टिलोटिया र उनकी बहिनी अनिता तिलोटियाले भने कि उनीहरू छोरा र छोरीको बिचमा कुनै भिन्नता नभएको परिवारमा जन्मेकोमा खुसी छन् । उनीहरुका बुबा आफैंले पनि स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । उनीहरुका पाँच सन्तानलाई पढ्ने र लेख्ने प्रशस्त अवसर दिएका छन् । उनीहरुले भने, ‘नतीजा हाम्रो अगाडि छ कि हामी तीन जना दिदीबहिनीहरूले सँगै पीएचडी गरेका छौं ।’
हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौँ कि यी तीन दिदीबहिनीहरू मिलेर पीएचडी गरेका छन् । चुडेला, जो राजस्थानको झुनझुनु जिल्लाको चुरु रोडको गाउँ हो । गाउँ चुडेलाका किसान मङ्गलचन्द तिलोटियामा जन्मेकी यी तीन छोरी र आमा पातासी देवीले चुडेला गाउँको जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्बेवाला विश्वविद्यालय (चुडेला विश्वविद्यालय) बाट पीएचडी गरेकी छिन्।
किरण तिलोटियाले रसायनशास्त्रबाट, बहिनी सरिताले भूगोलको विषयमा कृषि बजार सम्बन्धी अनुसन्धान गरेकी छिन् । अनिताले शिक्षामा महिला सशक्तिकरणमा पीएचडी गरेकी छिन् । तिनै बहिनीहरू विवाहित छन् । सरिताका पति महेश झजडिया झुनझुनु, किरणका पति अशोक सुरा जयपुर र अनिताका पति डा. अमित झाजाडिया झुनझुनुको गाउँ, भौंडा कलांका हुन् ।
किरण तिलोटियाले दीक्षान्त समारोह २० डिसेम्बर २०२० जेजेटी विश्वविद्यालय चुडेलामा भएको थियो । जेजेटी विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा। विनोद तिब्बेवालाले यस ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षा अभियानको सराहना गरेका छन् । यस विश्वविद्यालयका प्रो चेयरपर्सन डा। सुरजित सिंह पाब्ला, प्रेसीडेन्ट डा. नागराज मन्थ, प्रो–प्रेसिडेन्ट डा. को लागी आभार व्यक्त गरेका छन् ।
४७ बर्ष जेठ्ठो संग बिवाह गरेकी २२ बर्षीया पुजा एक्कासी रुदै मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
‘म जतिबेला पनि मा’रिन सक्छु’ : रामकुमारी झाँक्री
२४ बर्षिय छोरो धन कमाउन कोरिया गएको तर बाकसमा फर्कियो, रुदा रुदै बेहोस भईन बहिनी (भिडियो)
पूर्वयुवराज पारस शाह र रवि लामिछानेबीच रहस्यमय भेटवार्ता
February 15, 2021 goodmam
दुई मुख र तीन आँखा, सिङ भएकी गौमाताको दर्शन गरौ। July 27, 2021
साउदीमा गाडी दुर्घ’टना हुँदा नेपाली युवाको मृ’त्यु July 27, 2021
आहा ! दलितको छोरी यसरी मन्दिरको मुल पुजारी ,सबै बाहुन क्षेत्रिले यसरी खुट्टैमा ढोग्छन् (हेर्नुस् भिडियो ) July 27, 2021
आहो, आफ्नै घरमा बसेर ५० लाख येसरी कमाउछिन् रेखा (हेर्नुहोस) गरे के हुदैन ! July 27, 2021
अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर नेपाल फर्किए,नेपालमा फलाउँदै छन् मीठो स्ट्रबेरी July 27, 2021